I-Social B2B kanjani? | Martech Zone
I-Social B2B kanjani?
NgoLwesibili, Okthoba 30, 2012 Douglas Karr
Sisanda kubuza, Kungani Ukuthengisa Kwakho Kungaphenduli Komphakathi? ngakho-ke le infographic ayinakubekelwa isikhathi kangcono! Ama-61% wabathengisi baseMelika basebenzisa imithombo yezokuxhumana ukukhulisa ukuhola kwabo. I-Social B2B injani i-infographic evela ku-InsideView enikezela ngezibalo eziqinile nezibonelo ezithile ezinhle zokuthi amabhizinisi ayisebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana ukukhulisa ukuthengisa kwabo ngezebhizinisi nemiphumela yokuthengisa. Ukuhola okuningi kuvalwa ngokushesha… ngabe udinga isizathu esiningi?
Sesikushilo kalikhulu… kepha amathemba akho asevele esekufuneni umphakathi ngemikhiqizo nezinsizakalo zakho. Umbuzo uthi kungani ungekho?
Tags: b2bb2b imithombo yezokuxhumanaukuhola isizukulwaneUkunika Amandla Ukuthengisasocial media
Okthoba 31, 2012 ngo-5: 36 AM
Siyabonga ngalokhu futhi nge-infographic. Awukaze wehluleke ukumboza izihloko ezinhle kangaka ukuthumela njalo ngezikhathi ezithile. Ngiyayithanda indlela olukhombise ngayo uhlobo lwendlela yebhizinisi yezinkundla zokuxhumana kodwa umbuzo owodwa nje, ingabe iyasebenza lapho usaqala? noma kufanele wakhe isithunzi sakho ku-inthanethi kuqala?
Okthoba 31, 2012 ngo-11: 55 AM
@Hezi Ngikholelwa ukuthi ukuqala kungaba nomthelela omkhulu kunayo yonke ukuthi kunesifiso esimangalisayo sokuthola imikhiqizo emisha, izinsiza kanye nezicelo online. Kuthatha isikhathi nomfutho ukwakha ukuthembeka negunya, noma kunjalo!
Nov 30, 2012 ngo-4: 49 AM
Amabhizinisi amaningi ayaqala ukusebenzisa iwebhusayithi ukushayela okuningi
ithrafikhi ekhasini labo lebhizinisi futhi ngokuhambisana ne-Twitter, iphakathi kweziningi kakhulu
izindlela ezidumile zokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ukumaketha.